बाबुबाट छोरी,दाजुबाट बहिनी अझै कति दिन लुटिने ? आमाबाट ११ दिने सन्तान कहिलेसम्म मारिने ? दर्दनाक भिडियो ।
प्रेम सुनार, गुल्मी गत महिना पाल्पाको तिनाउँ–५, चर्चरेको जंगलमा दाजुव्दारा बहिनी बलात्कृत भएको भनिएको घटनाका पछाडी पछिल्लो चरण केहि चर्चाहरु चल्न थालेका छन । ती वलाकृत भनिएकी युवतीका नजिकका आफन्त संग बुझ्दा उनी आफु खुसी भागी विवाह गरेर गुल्मीबाटै गुल्मीको कुर्घा पुगेकी थिईन । केहि दिन पछि थाह पाएर ठुलो संख्यामा त्यहाँ पुगेका दाजु भाईहरुले जवरजस्ती छुटाएर त्यहाँबाट हिडालेका थिए ।
भिडियो हेर्न तल थिच्नुहोस ।